Madheshvani : The voice of Madhesh - गौतमले गरेको पत्रकारिताको मूल्यांकन अहिले गर्न सकिंदैन : मुख्यमन्त्री राउत
गौतमले गरेको पत्रकारिताको मूल्यांकन अहिले गर्न सकिंदैन : मुख्यमन्त्री राउत
वीरगन्ज, २ फागुन । पत्रकार गोपालचन्द्र गौतम प्रतिष्ठानले स्थापना गरेको गोतामे पत्रकारिता स्वर्ण पदक आज एक कार्यक्रमका बीच मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले झापाका पत्रकार केशव आचार्यलाई प्रदान गरे ।
नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साको सभाहलमा पुरस्कार वितरण गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले साहित्यकार र पत्रकार अहोरात्र खटेर समाज र जनतालाई सु–सूचित गर्दै आएको बताए ।
चार दशकअघि गोपालचन्द्र गौतमले गरेको पत्रकारिता अहिलेको बेलामा मूल्याङ्कन गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । उनले विचार हुनेले कलम निखार्न सक्दैन र कलम निखार्नेले विचार निखार्न सक्दैन र यी दुई कुरा पत्रकार गौतममा भरिपूर्ण रहेकोले त्यतिखेर क्रान्तिकारी पत्रकारिता गरेर समाज र देशलाई गति दिएको पनि बताए ।
मुख्यमन्त्री राउतले प्रतिष्ठानले रु १० हजारबाट शुरु गरेको पुरस्कारराशि एक तोला सुनमा परिणत गरेकोमा प्रशंसा गर्नुहुंदै सहयोग गर्ने आश्वासन पनि दिए ।
कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी बद्री खतिवडा, नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश २ का अध्यक्ष दीपेन्द्र चौहानले स्व. गोपालचन्द्र गौतमका बारेमा चर्चा–परिचर्चा गरेका थिए , प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जगदीशप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष चन्द्रकिशोरले स्व. गौतमको जीवनीको बारेमा प्रकाश पारे ।
कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री राउतले पछाडि परेको समुदायको सशक्तीकरणका लागि प्रदेश २ सरकारले काम गर्ने बताएका छन् ।
गोतामे पत्रकारिता स्वर्ण पदक वितरण समारोहमा बोल्दै मुख्यमन्त्री राउतले महिला र पुरुष समान ढंगले अगाडि नबढेसम्म समाजको विकास हुन नसक्ने बताएका छन् । दुवैलाई समान ढंगले अगाडि बढाउन प्रदेश सकारले प्रयास गरिरहेको बताए ।